ढोनपाले फोहोर व्यवस्थापन शुल्क घटायो, सडक सूचारु गर्न ठेकेदारहरुलाई निर्देशन ! – ebaglung.com
ढोनपाले फोहोर व्यवस्थापन शुल्क घटायो, सडक सूचारु गर्न ठेकेदारहरुलाई निर्देशन !
२०७४ भाद्र १८, आईतवार २१:५७	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
पहिरोमापरी मृत्यु हुने ओमबहादुर कामीको परिवारलाई परिवारलाई १ लाख सहयोग
सुमन सुनार बुर्तिवाङ २०७४ भदौ १८ । ढोरपाटन नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन बापतको शुल्कमा कटौती गरेको छ । नगरप्रमुख देबकुमार नेपालीको अध्यक्षतामा आज बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार फोहोर व्यवस्थापन बापतको शुल्क जम्मा रु ५० मात्र निर्धारण गरेको छ ।
यसअघि नगरपालिकाकाले प्रतिघरधुरी रु २ सय देखि १ हजारसम्म फोहोर करको निर्धारण गरेको थियो । नगरपालिकाले अन्य करको दायरा लगायत फोहोर करको दायरलाई समेत महङगो गरेको भन्दै स्थानीय स्तरमा व्यापक बिरोध समेत भएको थियो । साथै नगरकार्यपालिकाको बैठकले फोहोर बोक्नको लागि नगरपालिकाले आफ्नै गाडी खरिद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । अहिले भाडाको ट्रयाक्टरबाट फोहोर व्यवस्थापन भैरहेको छ ।
त्यसैगरी नगरकार्यपालिकाको बैठकले पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका ढोरपाटन नगरपालिका—५, पाखापानीका ओमबहादुर कामीको परिवारलाई आवास पुर्ननिर्माणको लागि रु १ लाख दिने निर्णय समेत गरेको छ । कामीको गत साउन २० गते घरमाथिबाट खसेको पहिरोको कारण ज्यान गएको थियो ।
त्यस्तै, बैठकले दशै तथा तिहार नजिकिँदै गर्दा स्थानीयहरुलाई यातायात लगायत आवतजावतमा कुनै असुविधा नहोस भनेर मध्यपहाडी लोकमार्ग र सालझण्डी—ढोरपाटन लोकमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरोका कारण अबरुद्ध बनेको सडक सूचारु गर्न पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सडक सूचारु गर्न सडक विस्तारको जिम्मा पाउका ठेकेदारहरुलाई निर्देशन समेत दिइएको नगरप्रमुख नेपालीले बताए ।
त्यसैगरी, नगर विकास समितिको मातहतमा बुर्तिबाङ बजारमा ढल निर्माण गर्दा बाटो छेउमा थुपारिएका माटोका कारण यातायातका साधनहरु तथा बजारबासीहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै तत्काल माटोको थुप्रो हटाई सडक सुचारु गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
गल्कोट नगरपालिका-११ रिघाको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
निसीको झिवाखोलामा एक हप्ते उद्घोषण एवं पत्रकारिता तालिम !